AKHRISO: Qodobada kasoo kulankii Dhuusa-Marreeb 5 maalmood oo ay wada hadlayeen dhinacyadu.
July 22, 2020 NEWS 2
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxda dawladda Federaalka iyo Madaxda dawlad gobaleedyada ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo aybuga wada hadlayeen arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Qodobkii ugu muhiimsanaa, heshiis lagama gaarin waxaana loo balamay in dib lays kugu soo laabto 2 todobaad, uuna ka shacayo magaalada Dhuusanareeb.
Farmaajo riyadiisii halkaas ayay ku dhimatay dhabarkuuna ka jabay waana lug hadhay. Waxaan mahad balaadhan Iyo amaan badan halkan uga dirayaa madaxda sharafta leh ee Puntland, Hirshabeele Iyo Jubaland oo diiday shirqoolkii loo maleegay umada soomaaliyeed kana dhigay waxaa suuragal ahayn. Well done Mr President Dani, Mr President Waare and Mr President Madoobe. Dhamaantiin Baal dahab ah ayaad ka gasheen taariikhda somaliya.
Waa nasiibdarro in asbuuc ka badan oo wadahadal ah aan wax la taaban karo lagu heshiin. ‘Doorasho waqtigeeda ku dhacda’ waa hadal qofba siduu doono u fasiran karo. Ma waqtigii guddiga Xaliimo-yarey bay ku dhacaysaa mise waqti kale?
Iyadoo wadahadal lagu jiro oo in badan oo xildhibaannadii ah Dhuusamareeb joogaan, ninka midiidinkiisa — Mursal, u sheegay inuu Baarlamaanka shiriyo oo doorashadii iyo wixii la isku hayey go’aanno laga soo saaro, ayaa heshiis iyo tanaasul laga sugayaa!
Ninkani waxaan aamminsanhay inuu wado qorshe shisheeye usoo dhiibay oo aan Soomaali dan u ahayn. Ma waxay idinla la tahay in nalaka jecel yahay oo nala siinayo nabad iyo dowladnimo aan la gaarsiin: Afganistaan, Ciraaq, Syria, Libya, iyo Yaman?
U maleynmayo kursiga uu uga tanaasulay jinsiyaddii Maraykanka, inuu uga tagayo geeso dhiig leh wax aan ahayn.
DAAWO: Maxay salka ku hayaan falalka Ammaan-darro ee kusoo badanaya Garoowe, Yaase geysanaya ?